Thu, Jun 4, 2020 at 8:02pm
पेलेस एप : कम मूल्यमा सामान किन्ने अवसरका साथै उपहार पनि
काठमाडौँ, ८ असोज पेलेस एपले असोज ३० गतेदेखि लक्की ड्र मार्फत ५० हजार रुपैयाँ क्यास ब्याकदेखि विभिन्न उपहार दिने योजना ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलोले ५० हजार रुपैयाँ नगद पाउनेछन् । दुईजनाले २५/२५ सय रुपैयाँको रेष्टुरेण्ट भौचर पाउने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार २ जनाले २५/२५ सय रुपैयाँको जीपलाईनको टिकट पाउनेछन् । एक जनाले ५ हजार बराबरको कपडा पाउनेछ भने १४ जनाले..
गुगलले यी ६ खतरनाक एन्ड्रोइड एप हटायो
काठमाडौँ, ७ असोज प्लेस्टोरमा रहेका कतिपय एपहरु प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण हुने गरेको पाइएको छ । गुगलको प्रमाणीकरण प्राप्त गरी प्लेस्टोरमा ठाउँ पाएका कतिपय एपहरुले प्लेस्टोरमा छिरिसकेपछि प्रयोगकर्तालाई हानी गर्ने अवाञ्छित गतिविधि गर्ने गरेका छन् । हालै गुगलले यस्तै गतिविधिमा संलग्न क्याम स्क्यानर नामक चर्चित एपलाई प्ले स्टोरबाट हटाइदियो । उक्त एपले प्रयोगकर्ताका डाटाहरु विज्ञापनको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको थियो ।..
काठमाडौँ, ६ असोज । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट स्पीड (गति) भारतको भन्दा राम्रो भए पनि गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको गुणस्तर भने केही खस्केको छ । सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनले मोबाइल इन्टरनेट स्पीड गति भारतको भन्दा राम्रो देखाएको हो । ओक्लाको ‘स्पीडटेस्ट ग्लोबल इन्डेक्स’ मा नेपाल यसपटक १३०औं स्थानमा छ । सन् २०१८ मा नेपाल यो सूचीको १२९ औं स्थानमा रहेको थियो।..
हेटौंडा, ६ असाेज । अब कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग गर्न नपाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हाे । समितिको आइतबार बसेको ५० औं बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालको चलाउन नपाउने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका..
‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’को मोबाइल एप्स सार्वजनिक, सम्पूर्ण जानकारी मोबाइलबाटै उपलब्ध !
काठमाडौँ, ४ असोज राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन बीमा सेवा र यसको सम्पूर्ण जानकारी अब मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपालकै पुरानो सो जीवन बीमा कम्पनीले बीमक र बीमितका लागि उपयोगी हुने मोबाइल एप्लिकेशन सार्वजनिक गरेको हो । संस्थानले संविधान दिवसको अवसर पारेर ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको हो । मोबाइल एप्सको सार्वजनिक गर्दै संस्थानका अध्यक्ष धनीराम शर्माले..
अब ह्वाट्सएप स्टाटस इन्स्टाग्राम र फेसबुक मार्फत् शेयर गर्न सकिने
काठमाडौँ, ४ असोज ह्वाट्सएपले ल्याएको नयाँ फिचरको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले आफ्ना ह्वाट्सएप स्टाटसलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा शेयर गर्न सक्नेछन् । यो फिचर एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै प्लाटफर्ममा उपलब्ध रहेको छ । यसको सहयोगमा अब एउटै पोष्टलाई ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा एकैपटक पोष्ट गर्न सकिनेछ र अलग-अलग पोष्ट गर्नु पर्दैन । ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताका लागि पछिल्लो समयमा नयाँ-नयाँ फिचरहरु ल्याइरहेको छ । यसअघि पनि ह्वाट्सएपले स्टाटससँग..
अब पढ्नलाई कक्षा जानै नपर्ने, घरमै बसेर पढ्न मिल्ने व्यवस्था
काठमाडौँ, २ असोज गरिब र जेहेन्दार विधार्थीलाई लक्षित गर्दै बिजहब आइटी सर्भिसले समय र पैँसाको बचत होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालमै पहिलो पटक घरमै बसेर पढ्न मिल्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । संस्थाको डब्लुडब्लुडब्लु डट ओटिटिआइएसएज डट कम/लर्न एनिह्वेर, एनि टायम नामक अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत् विभिन्न विधाका अनलाइन तयारी कक्षा संचालन भएका छन् । जस् अन्तर्गत अब घरमै बसेर पढ्न सकिनेछ ।..
काठमाडाैं, १ असाेज । संविधान दिवसकाे उपलक्षयमा नेपाल टेलिकमले एनटिसी ग्राहकलाई लक्षित गरी गरी विशेष अफर ल्याएको छ। असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवसका असवरमा टेलिकमले १ सय रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा प्याक अफर ल्याएको हो। एनटिसी प्रयाेगकर्ताले याे अफर यो अफर असोज १ देखि लागू भई १५ गतेसम्म प्रयोग गर्न पाइने छ। यसमा हरेक दिन १ जिबी लिन पाइने छ र त्यो..
काठमाडौँ, १ असोज फेसबुक विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सोसल मिडिया प्लाटफर्म हो । दैनिक करोडौँको संख्यामा भिडियो, फोटो तथा अन्य सामाग्रीहरु फेसबुकमा शेयर गरिन्छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि यसमा भएका अन्य धेरै फिचरहरुमध्ये ‘लाइक्स’ फिचर सबैभन्दा लोकप्रियमध्ये एक फिचर हो । फेसबुक पोष्टहरुको लोकप्रियता मापनका लागि यो एउटा मुख्य मापदण्डसमेत मान्ने गरिएको छ । अर्थात् फेसबुक पोष्टमा जति धेरै लाइक्स प्राप्त..
तपाईंलाई माेवाइल ह्याक भएकाे शंका छ ? यसरी थाहा पाउनुस्
काठमाडाैं, १ भदाै । पछिल्लाे समय फेसबुक तथा फाेन ह्याक हुने समस्या बढ्दै गएकाे छ । कसैले हाम्राे फाेग ह्या गर्दा हाम्रा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाहरू लि हुन्छन् । कतिपयले त आफ्नो फाेन ह्याक भएकाे नै थाहा पउन सक्दैनन् । यसले समाजमा धेरै अपराधहरू निन्त्याएकाे छ। यहाँ तपाईको फोन ह्याक भएनभएको थाहा पाउने यस्ता ७ तरिकाहरु रहेका छन्, जसमाः फोन स्पीडः यदि तपाईको फोन सामान्य..
एनसेलका ग्राहकलाई खुशीकाे खबर ! आकर्षक प्याकसहितकाे ‘मेरो प्लान’
काठमाडौं, १ असाेज । एनसेलका ग्राहकले अब कुनै पनि समय बिना कुनै झन्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवा लिन सक्ने भएका छन् । एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवाबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । यहि बुधबार ९ असोज १० देखि लागु हुने यो योजना अन्तर्गत प्लान १९९, प्लान २९९,..
सावधान ! तपाईंकाे मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्ने बानी छ ?
काठमाडाैं, ३१ भदाै । आफूले सुत्नु अगाडि खाटमा चार्ज गरेर राखेको ट्याब्लेट बलेर बिहान उठ्दा डस्ना समेत प्वाल पारिदिएपछि एक एघार वर्षीय युवक आश्चर्यमा परे । यसरी धेरैपटक प्राविधिकविद्हरुले मोबाइल चार्ज गर्दा जल्न सक्ने वस्तुमाथि नराख्न सुझाव दिँदै आएका छन् । उसो भए कसरी चार्ज गर्नु सुरक्षित हुन्छ त रु आगो नियन्त्रण विभागका अनुसन्धान विद् पल श भन्छन्, “सबैभन्दा पहिले त कसैले..
भक्तपुर, ३० भदौ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका कर्मचारीले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सङ्गठनको संस्थागत हकहित र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका सवालमा व्यवस्थापनसँग मौखिक र लिखित माग राख्दै आजदेखि कर्मचारीले सीटीईभीटीमा धर्ना दिएका छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले व्यवस्थापनलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मागहरुको सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले..
धम्बोझी, ३० भदौ भेरी अस्पतालमा नवजात शिशु बचाउनका लागि गुणस्तरीय सेवाको बच्चाको मुटुको धड्कन नाप्ने यन्त्र (मोयो) तथा गर्भवस्थ शिशुको परीक्षण गर्ने ९नियोविट०को थालनी गरिएको छ । शिशु मृत्युदर उच्च रहेपछि अस्पतालले शिशु मृत्युदर घटाउन अस्पतालले आजदेखि यो सेवा विस्तार गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा रुपानन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा हरेक वर्ष ११ हजार शिशु मृत अवस्थामा जन्मन्छन् । करीब १३ हजार..
काठमाडाैं, ३० भदाै । स्मार्टफोन हाम्राे आधारभुत आवश्यकता बनिसकेकाे छ । दिन प्रतिदिन विश्वमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । बजारमा नयाँ नयाँ स्मार्टफोनहरु आउने क्रम जारी छ ।यस्तोमा फोनबाट निस्कने विकिरणको खतरा पनि बढ्नु स्वभाविकै हो । हालैका दिनहरुमा स्मार्टफोनबाट निस्कने रेडिएसनका विषयमा विभिन्न खाले रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । कतिपय रिपोर्टमा स्मार्टफोनबाट निस्कने विकिरण खतरनाक भएको र प्रयोगकर्तालाई क्यान्सरसमेतको जोखिम हुने समेत दाबी..
काठमाडौँ, २९ भदौ दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै सुबिसु केबलनेट प्रालिले मात्र ९९ रुपैयाँमै इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । यस प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकहरुले मात्र रु. ९९ (कर सहित) मा एक महिनाको लागि ३० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा अथवा सोहि मूल्यमा क्लियर टिभि प्रिमियम प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नेछन् जसमा ७५ भन्दा बढी एचडी च्यानलसहित २७५ भन्दा बढी..
काठमाडौं, २९ भदौ । फेसबुकमा तपाईले दिनहुँ अनेक पोस्ट गर्नु हुन्छ, गर्नुस केहि आपत्ति छैन । तर अब यसमा तपाईले अलिक विचार र होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । फेसबुकमा जथाभावी पोस्ट गर्न र कमेन्ट गर्न बन्देज लाग्न गइरहेको छ । फेसबुक व्यवस्थानले पोस्ट गरिने आपत्तिजनक सामग्रीका खिलाफ कडा पाइला चाल्न गइरहेको छ । अब सत्यता नभएको तपाईले पोस्ट गरेको सामग्री फेसबुकमा पोस्ट नै..
काठमाडाैं, २८ भदाै । हालै स्मार्ट फाेनकाे डाटा चाेरी गर्ने खतरनाक एप्लिकेसन पत्ता लागेकाे छ । एउटा साइबर सेक्योरिटी कम्पनीले हालै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा एक मालवेयर पत्ता लगाएको हाे । उक्त मालवेयरले २४ वटा एन्ड्रोइड एपमा आक्रमण गरेको छ । ती एपका प्रयोगकर्ता ४ लाख ७२ हजार भन्दा धेरै रहेका थिए । मालवेयरले ती एपमा आक्रमण गरेसँगै प्रयोगकर्ताका डाटा जोखिममा परेको खुलासा भएसँगै..
काठमाडौँ, २७ भदौ । आज (शुक्रबार) १३ सेप्टेम्बर, अर्थात् अंग्रेजी क्यालेण्डरको नवौं महिनाको १३ औं दिन । यो दिन के का लागि प्रख्यात होला ? आजको दिन पृथ्वीका मानिसले मानवताको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम अध्याय थपेका थिए । आजभन्दा ६० वर्ष अगाडि पृथ्वीबाट ११.२ किमिप्रति सेकेण्डको गतिले उडेर झण्डै ३८ घण्टे लामो यात्रा पश्चात रूसले प्रक्षेपण गरेको लूना–२ ले चन्द्रमामा पुग्ने सफलता पाएको..
काठमाडौँ, २६ भदौ सौर्य मण्डल बाहिरको ग्रहमा पानी पत्ता लागेको छ । खगोलविदहरुले पहिलो पल्ट एक्सो प्लानेटमा पानीको बाफ र अन्य ग्यासहरु पत्ता लगाएका हुन् । यस ग्रहको सतहमा पानीको बाफ र तापमान दुवै पत्ता लागेका छ । यी दुवै तत्वले जीवन निर्माण र यसको प्रणालीलाइ साकार पार्न सक्छ । एक्स्पप्लानेटको रूपमा परिचित यो ग्रह पृथ्वी भन्दा आठ गुना ठुलो रहेको छ..
काठमाडौं, २६ भदाै । ६ महिनापछि नेपालमा दर्ता नगरिएका माेबाइल नचल्ने भएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनापछि इन्टरनेशनल मोवाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी कोड 'आइएमइआइ' दर्ता नभएका मोवाइलमा बन्देज लगाउने भएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणले एमडिएमएस 'मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम' लागू गर्न लागिएको छ । प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यो सिस्टम लागू गर्नका लागि प्राधिकरणले भारतको..
डोटी, २४ भदौ नेपाल टेलिकमले दशैँअगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने अत्याधुनिक ‘फोर जी’ सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । दशैँअगावै यहाँका मुख्य बजार क्षेत्रका उपभोक्ताले चौथो पुस्ताको ताररहित दूरसञ्चार सेवा (फोर जी) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुर कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य शहरलगायतका ठाउँबाट ‘फोर जी’ सेवा शुरु गरिने भएको छ..
काठमाडौं, २१ भदाै । अब विदेश जाँदा नेपाल टेलिकमको सीमकार्डबाट मोवाइल डाटा चलाउन पाइने भएको छ। टेलिकमले पोस्टपेड ग्राहकहरुलाई विभिन्न ८७ मुलुकका १९२ भन्दाबढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो। वैशाख १६ देखि जीएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि पनि छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा यस्तो रोमिङ सेवा दिइरहेको छ। टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेडका ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङमा भ्वाइस..
काठमाडौँ, २१ भदौ नेपाल टेलिकमले शनिबार राती ११:३० बजेदेखि फोरजी/एलटिई सेवा अपग्रेड गर्ने भएको छ । अपग्रेडको समयमा मोवाइल सेवा प्रयोगमा कठीनाइ आउनसक्ने टेलिकमले जनाएको छ । मोवाइल सेवा अबरूद्ध हुन पुगे मोवाइल स्वीच अफ गरी अन गर्न पनि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, वायरलेस सेवा निर्देशनालय बबरमहलले सूचना निकालेर जानकारी गराएको छ। ‘फोरजी/एलटिई सेवा सञ्चालनका लागि यही मिति २०७६ भदौ २१ गते..
काठमाडौँ, २० भदौ फेसबुकले डेटिङ सुविधा प्रदान गरेको छ । यो सुविधाबाट फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नालागि उपयुक्त प्रेमीप्रेमीका फेसबुकमै भेट्टाउन सक्छन् । फेसबुकले अमेरिकासहित २० मुलुकमा सामाजिक सञ्‍जालको बृहत डेटिङ सेवा सुरू गरेको हो । १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका प्रयोगकर्ताहरुले यो सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । इन्स्टाग्रामका पोस्टहरुलाई पनि सिधा रुपमा फेसबुक डेटिङ प्रोफाइलमा जोड्न सकिने अनुमति दिएको छ । यससँगै इन्स्टाग्रामका फलोअर्सहरुलाई..
काठमाडौं, १९ भदौ । एटीएम ह्याक प्रकरण अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञ टोली नेपाल आएको छ । सिङगापुरबाट बुधबार राति फरेन्सिक विज्ञटोली नेपाल आएको हो । एटीएम ह्याक गर्ने चिनियाँ टोलीले १३ वटा बैंकका एटीएम बुथबाट तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ लुटेको राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले ठहर गरेको छ । बिहीबारदेखि नै फरेन्सिक टोलीले अध्ययन अध्ययन गर्ने छ । विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि एटीएम ह्याक..
काठमाडौं, १९ भदौ । अब अरूका नाममा भएको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जारी भएका सबै सिम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाइएको बताए । ‘केही दिनमै हामी मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत सबै प्रयोगकर्तालाई अरूका..
काठमाडौँ, १८ भदौ पशुपतिनाथको मन्दिर, त्यसको अगाडि बीच भागमा दुई आँखासहितको स्वयम्भूको सुन्दर तस्बिर । त्यसको तल उड्दै गरेका पाँच परेवा । नेपालको प्रख्यात मन्दिरलाई जोडेर त्यसमा शान्तिको प्रतीक र सन्देशको बाहकका रुपमा परेवालाई कलाले भरेर बनेको नेपाल टेलिभिजनको लोगो हेर्दा आफैँमा सुन्दर देखिन्छ । सूचना र सञ्चारको प्रतिनिधित्व गर्ने २०४१ सालमा बनेको उक्त लोगो जुन आज हामीले सधैँ समाचार या कार्यक्रमको..
भक्तपुर, १७ भदौ सडकभरि जथाभावी लत्रिएर दुर्घटनाका कारण बन्दै आएको केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका तारहरु आगामी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन नगरे कारवाही गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज प्रजिअ नारायण भट्टको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा यस्तो निर्णय भएको हो । उहाँले कुनै पनि बहानामा केबुल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले पन्छिन नपाउने भन्दै १५ दिनभित्र सडकमा लत्रिएका तार..
काठमाडौँ, १५ भदौ नेपाल प्रहरीले अनाधिकृतरुपमा एटिएमबाट पैसा निकाल्ने पाँच चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मध्यरातमा दरबारमार्गस्थित नवील बैंकको एटिएमबाट अनाधिकृतरुपमा पैसा निकाल्दै गर्दा पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले मध्यरातमा नवील बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दै गर्दा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । “शुरुमा एटिएमबाट पैसा निकाल्दै गर्दा एक जनालाई पक्राउ गरेका..
Results 781: You are at page6of 27